Gumiguru 2020 - Peji 2
Archives yeOctober 2020
Tech kambani Honeywell neChishanu yakaunza yavo inotevera-chizvarwa huwandu hwekomputa, iyo System Model H1. Chizvarwa cheH1 chemakomputa, icho chinoshandisa tekinoroji yakasungirirwa, yakarongedzwa zvine hungwaru kuti ivandudzwe nekukurumidza mukati mehupenyu hwayo, yakadaro kambani. [Verenga zvakawanda ...] nezve Honeywell inosvitsa inotevera-gen huwandu hwekombuta ine gumi maubhu
Chii chinonzi Apple Fitness +? Itsva yeApple Watch Workout chirongwa chakatsanangurwa
Chiitiko chaApple chaSeptember chakabata smorgasbord yezvigadzirwa zvitsva nemasevhisi ayo arikuvhura, asi chimwe chinokwezva zvikuru yaive Apple Fitness +, chiitiko chitsva chemuviri icho chiri kuvhura. mhuri yemasevhisi akabatana asi zvakare inowanika pairi yega, Fitness + inoita kunge nyowani nyowani… [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii chinonzi Apple Fitness +? Itsva yeApple Watch Workout chirongwa chakatsanangurwa
Kudza 10X Lite iri nyowani yepakati-renhare smartphone inouya kuSaudi Arabia, Europe, neRussia
Rukudzo, iyo yemireniyamu sub-brand yeHuawei yakazivisa iyo Honor 10X Lite, ichitangisa muSaudi Arabia nekubuda kukuru kweEuropean kunotarisirwa. Iyo yepazasi yepakati-renji nhare inouya pamutengo wekugogodza, asi chokwadika, haingauye neGoogle Mobile Services (GMS) kunze-kwebhokisi. Ndiyo imwe inodhura vhezheni ye Honor 10X uye 10X Max phablet, yakatangwa munguva yezhizha, asi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Honor 10X Lite iri nyowani yepakati-renhare smartphone inouya kuSaudi Arabia, Europe, neRussia
PNY Inotangisa XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 SSDs
PNY nhasi yazivisa kuvhurwa kweXLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 Solid State Drive, iyo "CS3040", iyo ichaendesa rinotevera chizvarwa kumhanya uye Ultra-yakakwira kuita kunodiwa nhasi. PNY yekuda kugadzira iyo yekupedzisira-inokurumidza-yekuchengetera mukati kuchengetedza mhinduro yanhasi ye4K uye 8K zvemukati vagadziri, zvakakwirira-zvine simba kunyorera uye inogara ichida mitambo, tungamira ku… [Verenga zvakawanda ...] nezvePNN Inovhura XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 SSDs
Porsche Dhizaini uye Acer vapinda mubatanidzwa mutsva unokanganisa mashandiro ePorsche Dhizaini dhizaini yekugadzira uye hunyanzvi hwekufunga neAcer's tekinoroji yekuvandudza uye ruzivo rwakadzika midzi muchikamu chepasi rose chemakomputa. Mapato ese ari maviri anovavarira kuendesa yakasarudzika, mamiriro-e-iyo-zvigadzirwa zvigadzirwa. Chisikwa chekutanga chakagadzirwa pamwe chete ibhuku rekumusoro-soro rinosanganisa… [Verenga zvakawanda ...] nezvePorsche Dhizaini uye Acer Vhura iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS